Wax ka baro waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo Adobe Illustrator sannadkan | Abuurista khadka tooska ah
Kuwani waa beddelka ugu fiican ee bilaashka ah ee Adobe Illustrator sannadkan
Jorge Neira | | muujiye
Ma jirto wax diidaya hogaaminta Adobe Illustrator sida barnaamijka ugu caansan sameynta sawirada vectorMaaddaama ay ka duwan tahay barnaamijyada garaafyada kale, Adobe Illustrator wuxuu adeegsadaa muuqaallada vektorka oo leh tibaaxyo xisaabeed si loo abuuro xariiqyo, qaabab, iyo midabbo.
Tani waa natiijada fursado waaweyn oo lagu shaqeyn karo miisaan kasta, xitaa wax u weyn sida boorarka oo aan lahayn wax muuqaal ah oo muuqaal ah.
1 Tani waa sirta weyn ee Adobe
2 Miyaad ku dhiiran kartaa inaad eegto waxyaabaha kale ee ugu fiican ee Adobe Illustrator?
Tani waa sirta weyn ee Adobe
Sirta weyn ee Adobe waa kuwan naqshadeynta dulinka ee kuu oggolaanaya inaad naqshadeyso oo aad sawirto, samee astaamo, astaamo, sawirro, boodhadhyo iyo waxyaabo kale oo muhiim ah oo shabakadda ah.
Hase yeeshe wax weyn ayaa jira dhibaatada Adobe Illustrator waana qiimaheeda, maadaama tani ay tahay qalab qaali ah tanina ay keentay xiise sare waxyaabaha kale ee suuqa yaal, qaar waxay kujiraan tirtirida sicirka halka kuwa kale ay gebi ahaanba bilaash yihiin oo lacag badan baa kuu keydin doonta, ilaa intaad mid raadineyso qalab fudud.
Miyaad ku dhiiran kartaa inaad eegto waxyaabaha kale ee ugu fiican ee Adobe Illustrator?
Tani waa bedel aad u fiican oo muujiya sawirka qeybta ugu fiicanna waa taas qiimo kuguma fadhiyo. Xirmada naqshadeynta dulinka ee Inkscape waa mid aad u kala duwan waxaa isticmaali kara sawirqaadeyaal xirfadlayaal ah iyo kuwo xirfadlayaal ah, sida naqshadeeyayaasha webka.
Inkscape ayaa leh qalab loogu talagalay abuurista qaabab oo wuxuu ku hagaajiyaa cloning, ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee wax-u-qabashada shayga, miirayaasha iyo sawirrada ayaa buuxiya. Waxaa jira waxyaabo yar oo sawir-qaade uu sameyn karo oo Inkscape uusan sameyn karin tanina waa faa iido weyn.
Es qalab furan, kaas oo xoogaa xariifnimo ah aad wax ka beddeli karto oo aad ku dari karto barnaamijyada kale ee software-ka ah. Waxaa laga yaabaa in cabashada qaar ay tahay in si tartiib tartiib ah ay u socoto, taasi waxay ku xirnaan doontaa qalabka ama nidaamka aad ku shaqeysid.
Tani waa qalab kale oo adag oo aad u fudud. SVG waa bilaash waana waxaad ku abuuri kartaa feylal farshaxan duluc leh qiyaaso kala duwan inaad u isticmaali karto Google Chrome kordhin ahaan. Qalabkeedu waa aasaasi: qalimaan dhumucdoodu kala duwan tahay, gooladaha Bézier, oo lagu daro qoraalka, garaaca iyo buuxinta, lakabyada iyo wax kale oo yar.
Qodobka ugu weyn ee loogu talagalay Boxy SVG waa taas Waa wax aad u fudud, taas oo ka dhigaysa mid deg deg ah oo sahlan in wax la barto natiijada ka soo baxdaana waa faylal nadiif ah oo hufan.
Adiga Gravit waxay bixisaa astaamo badan oo sawir-qaade sidoo kale leeyahay si toos ah ugu jirta biraawsarkaaga, sidaa darteed uma baahnid inaad soo dejiso waxna waxaad ku heli kartaa naqshado kala duwan qalab kasta oo aad leedahay, illaa iyo inta uu jiro xiriir internet ah.
Kaliya waa inaad iska diiwaangelisaa koontada iyo waxaad wadi kartaa tifaftiraha Chrome, Firefox ama Safari. Qalabka Gravit ee aadka waxtarka u leh waa: qalimaan dhumucdoodu kala duwan tahay, xariiqyo, sawirro goynta, sameynta leydilo, xusullo, saddexagallo iyo qaabab kale, lakabyo, miirayaal iyo qaabab kale oo wax lagu beddelo.
Waxaad awoodi kartaa Ka dhoofinta sawirada JPG, PNG ama SVG In kasta oo Gravit uusan ahayn Sawire, haddana waa mid aad u adag oo si fudud loo isticmaali karo.
VECTR waxaa loo heli karaa sida barnaamij kombuyuutar ah ama barnaamij internet ah. VECTR waa a sidoo kale barnaamij bilaash ah maxaad awoodaa isticmaal si loo abuuro loona tafatiro sawirada, ama isla desktop-ka ama biraawsar kasta oo casri ah, maaddaama barnaamijkani yahay mid aad, aad u dareen leh oo aad u fudud in la barto.
Software-ka naqshadeynta ma ahan mid dhib badan haba yaraatee xitaa cunug wuu isticmaali karaa. Barnaamijkan bilaashka ah waxaa ka maqan waxyaabo badan oo ka mid ah astaamaha horumarsan ee Adobe Illustrator, laakiin waxay leedahay astaamo aad loo jeclaysto sida qaababka, qoraalka, lakabyada, iyo waxyaabo kale oo badan. Haddii aad tahay qof bilow ah, tani waa ikhtiyaar weyn ama haddii aad u baahato samee shax fudud ugu yaraan dadaal halkan waa xalka.
Ugu dambeyntiina waxaan xusnay xulashadan wanaagsan ee ka shaqeysa biraawsar kasta oo casri ah, iyo waxay bixisaa go'an aasaasiga ah ee hawlaha tafatirkasida qalabka wax lagu sawiro, qaababka, qalabka qoraalka, iyo xoogaa ka sii badan. Qalabkan waa lacag la'aan oo sida xaqiiqada ah waad jeclaan doontaa markaad isticmaasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Kuwani waa beddelka ugu fiican ee bilaashka ah ee Adobe Illustrator sannadkan
Inkscape waxay u egtahay Freehand oo kujira isdhexgalka. Freehand wali si balaaran ayaa loogu isticmaalaa vector.
Weli waxaan isticmaalayaa Freehand, wali way ka dhaqso badan tahay Sawirka siyaabo badan.
Inkscape waa tan ugufiican ee aan isticmaalay, waxaan ahaa naqshadeeye isticmaala qalabkan mudo dhowr sano ah wuxuuna badalayaa Sawirqaadaha isagoo si sax ah ula macaamilaya.
Ma naqshadeeyayaashu runtii kaliya naqshadeeyaan?
Naqshad loogu talagalay ganacsiga barnaamijka moobiilka